Sainzi - Wikipedia
peji rino rinoda kuwerengwa ne kuwedzerwa
Sainzi (Sho. Hwuruzivo, Uruzivo; Nge. Science) ruzivo runowanikwa nekudzidzira, kucherechedza nekuedza chokwadi chakamboonekwa uye chisina kutsigirwa. Galileo Galilei anowanzoonekwa sababa vesainzi yemazuva ano.
Mhando dze sainziEdit
Kune akasiyana sainzi akaiswa muzvikamu zvinotevera:
Sainzi ye zvisikwanamwari
sainzi ye nhambwe
Sainzi ye nzanga
Utongwanyika / matongegwoenyika
sainzi ye zvishandiswa
Dzimwe nzira dze sainzi ndedziri pazasi:
Mutowo we sainziEdit
Hwaro hwesainzi hunoshanda. Miitiro yesainzi ine mitoo yavo imene inoshandiswa kuratidza zvokwadi dzesayenzi.
Matsananguriro echinhu chesainzi anobva mudzidziso kana fungidziro. Zvadaro, kuitira kuti chokwadi chigamuchirwe, chinobuda kubva mukufungidzira uye kuburikidza nemiedzo yepamutemo, inovandudza pfungwa yakakwana kana dzidziso senyaya yekutaura uye maitiro.
Saka, chimiro chenzira yesainzi maonero anofambirana nezviito zviri kutariswa. Kubva pamaonero masayendisiti anoumba dzidziso. Gare gare vanoongorora kana dzidziso dzacho dziri dzechokwadi. Kunze kwekunge ivo vachiramba dzidziso. Kana zvichiita sokuti kakawanda dzidziso yacho yakafanotaura chokwadi, uye haina kukanganisa, inenge iri dzidziso inogamuchirika.
Retrieved from "https://sn.wikipedia.org/w/index.php?title=Sainzi&oldid=94799"
Last edited on 15 Chivabvu 2022, at 12:04
This page was last edited on 15 Chivabvu 2022, at 12:04.